Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali kweBulgaria neGolden Visa
● Ubuzwe ngokutshala imali eBulgaria ngokutshala imali ku-real estate
Khipha ku-internet Ama-ejenti wobuzwe ngokutshalwa kwezimali eBulgaria kanye nabameli be Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eBulgaria kanye nabashintshi bezindawo ezithengiswayo Izinhlelo zobuzwe eBulgaria zisebenza ngokubambisana ekuvikeleni kwamakhasimende.
Ubuzwe ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali eBulgaria buhlinzeka ngezinsizakalo zokuhlala ngokutshalwa kwezimali eBulgaria, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eBulgaria, Ubuzwe ngohlelo lokutshalwa kwezimali eBulgaria, Ubuzwe besibili ngokutshalwa kwezimali eBulgaria, ubuzwe bobabili ngokutshala eBulgaria, ubuzwe kanye nokuhlala ngokutshala imali eBulgaria. , Ubuzwe obuhlala njalo ngokutshalwa kwezimali eBulgaria, Ubuzwe besikhashana ngokutshala imali eBulgaria, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eBulgaria, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eBulgaria, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eBulgaria, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eBulgaria, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eBulgaria, okwesibili Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eBulgaria, ukuhlala kabili ngokutshala imali eBulgaria, ukuhlala kanye nobuzwe ngokutshala imali eBulgaria, ukuhlala kanye nobuzwe ngokutshala imali eBulgaria, izinhlelo zokuhlala kwezomnotho eBulgaria, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eBulgaria, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eBulgaria, okwesibili ipasipoti i n IBulgaria, izinhlelo zepasipoti zesibili eBulgaria, uhlelo lwesibili lwepasipoti eBulgaria, ipasipoti yesibili eBulgaria, indawo yokuhlala kanye nepasipoti yesibili eBulgaria, ipasipoti yesibili yezipolitiki eBulgaria, ipasipoti yesibili ngokutshala imali eBulgaria, ipasipoti yesibili yobuzwe eBulgaria, uhlelo lwesibili lwepasipoti eBulgaria, izinhlelo zesibili zepasipoti eBulgaria, i-visa yegolide eBulgaria, ama-visa egolide eBulgaria, izinhlelo ze-visa zegolide eBulgaria, uhlelo lwe-visa yegolide eBulgaria, i-visa yesibili yegolide eBulgaria, uhlelo lwesibili lwe-visa yegolide eBulgaria, i-visa yegolide emibili eBulgaria, ubuzwe kanye ne-visa yegolide eBulgaria, ukuhlala kanye ne-visa yegolide eBulgaria, isakhamuzi se-visa segolide eBulgaria, uhlelo lwe-visa egolide eBulgaria, izinhlelo ze-visa zegolide eBulgaria.
"Izisombululo ezi-1 zokuma" zabo bonke ubuzwe bakho ngokutshala imali eBulgaria ngokuxhaswa okwengeziwe.
Ukutshalwa Kwezimali Okuncane eBulgaria kobuzwe ngokutshalwa kwezimali: EUR 1,024,000
Isingeniso iBulgaria kanye nobuzwe ngokutshalwa kwezimali
IBulgaria iyisizwe esihle. Izintaba ziyamangalisa, futhi izindawo zokungcebeleka okushibilika eqhweni akuyona into emangazayo kangako yokufisela esinye isizwe emhlabeni. Kukhona ithani labenzi bompe abahlukile lapha. Ungabona iziqukathi ezitholakala ukuthi zingathengwa ezinhlangothini zemigwaqo nakwamanye amadolobha. Ukudla okulinywe phansi kuyatholakala ukuthi kuthengwe yonke indawo futhi kumnandi kakhulu. Ehlobo elishisayo nobusika obubandayo. Ubusika bungaba ngaphansi - 15. Ihlobo lingaxhumana nama-35 noma ngisho nama-40 ezindaweni ezithile njengePlovdiv naseningizimu yeBulgaria. Enye into ebeka iBulgaria ebalazweni olwandle oluhle olunesihlabathi, kanye namazinga okushisa amanzi afudumele oLwandle Olumnyama ngasekupheleni kwenkathi yasentwasahlobo, ulwandle lungashintsha ukusuka emigqeni yolwandle evuthayo futhi ekhuthazwe ezemidlalo iye ezinkundleni zekamu ezinokuthula nezithandekayo.
IBulgaria ingakunika ukuhlangana okuhluke ngokuphelele ngokuthembele ekutheni uhlala yini endaweni eyodwa yasemadolobheni, noma emadolobheni amancane namancane. Ngesikhathi lapho abantu beveza amadolobha aseBulgaria, baveza “amahhashi neloli” uhlobo lwamadolobha. Ngokuhambisana nale migqa, qiniseka ukuthi uzohlala kulolo hlobo lwesimo sezulu uma ngabe ucabanga ngobukhona basemaphandleni eBulgaria, nganoma iyiphi indlela ngeke ube kude nabo bonke abanye abantu kunabaningi abasebenza kudala abakhetha lezo zindawo futhi bazazise uhlangothi oluhle lwempilo eqonde kakhudlwana, kunezifunda eziseduze neVeliko Tarnovo, Dobrich, ne-Elhovo ukwenza nje ireferensi yezithandani, ezinemiphakathi emikhulu ekhulu kakhulu. Inani labantu baseBulgaria lincipha ngokushesha.
Abashayeli ababili ababalulekile bale fiasco ukufuduka (abantu abaningi bashiye iBulgaria selokhu kwenyukela e-European Union), befuna izimo zokusebenza ezingcono, nokusebenzisa ithuba lokuthuthuka. IBulgaria inokuntuleka kwe-Net komuntu oyedwa njengewashi. impela, ngisho nokuhlolwa okuvela e-Eurostat kusho ukuthi kungenzeka ukuthi abantu baseBulgaria bangalahlekelwa abanye abantu abayizigidi ngonyaka ka-2050 futhi babe ngaphansi kuka-6.000 000.
Amachibi asogwini lolwandle lwaseBulgaria oLwandle Olumnyama angatholakala emahhotela, ngokuvamile apakishwa ngenkathi ephezulu (ngoJulayi kuya ku-Agasti), noma kunjalo, phakathi kwezikhoselo, ungathola ugu lolwandle olusitshekelwe oluzokuthusa, kuthathe isikhathi esiningi njengoba kudingeka ukuthatha uhambo olusheshayo futhi ubone isizwe, uzoyithanda! Ukuhamba ngaphakathi kwesizwe ngokuvamile kulula ngoba konke kusondelene, uhambo lweSofia-Varna (okunye kokuhlukaniswa okukhonjwe kakhulu ukuhamba kungamakhilomitha angama-450 kuphela.) Futhi kukhona nezindiza ezimbalwa ezixhumanisa izindawo ezimbili zasemadolobheni ngaphansi Imizuzu engama-60.
Kunoma ikuphi, uma kungenzeka ufune ukuthanda indawo enhle futhi ube nethuba elanele, ungathatha ukuphathwa kwezitimela okulingene, ungadlula usuka ezintabeni uye ogwini loLwandle Olumnyama emahoreni amaningana naphakathi, uzothola izigodi ezinhle. Ukudla neziphuzo kunesizotha futhi kuyasiza uma ungaveli kohlobo olweqile. Ama-cafés amaningi adla ama-specials ngobukhulu phakathi kuka-12-2 pm futhi ungaba nokuhlukile kwezicucu ezingaba ngu-5-6. Ama-Espressos abiza kakhulu lapha kunaseYurophu esele. Ungaya endaweni yekhofi esezingeni eliphezulu ngasekuqaleni kosuku ukuthola i-espresso futhi kubiza i-leva engu-2.00. 1 i-Euro. Nawe ungathola i-brew ye-2 leva mayelana ne-Euro.
AmaBulgaria ayizwe elijabule kakhulu. Lesi sizwe sasungulwa ngo-681 AD ngaphezulu kwalokho, sikhuthazelele izinto ongeke uzicabange, ngokufanayo bangabasunguli bezinhlamvu zaseBulgaria ukuze kuthi ngaleso sikhathi zikhule ziye emazweni amaningi amaSlav, babe nosuku lokudumisa izinhlamvu zaseBulgaria zilandelana namasiko, kungumhla zingama-24 kuNhlaba (May), uzobona ukuthi abafundi abaphansi bathatha imigwaqo ngezimoto zabo. Iningi lentsha liyalela abantu baseBulgaria ngobukhulu ukuthi baxhumane ngesiNgisi futhi balusizo kakhulu futhi kuyinjabulo yokuba seduze. Abantu abaningi abafundisiwe baseBulgaria basebenza e-IT nasendaweni yokuhambisa kabusha enkulu lapha. AmaBulgaria nawo ayaziwa ngamakhono awo e-IT.
Bathola isinxephezelo esihle kakhulu abangahlala kuso ngokumangalisayo, ikakhulukazi uma kwenzeka bevela kude nenhlangano evela phesheya. IBulgaria inejubane lewebhu elisheshayo emhlabeni, uthola isikhuthazo esingajwayelekile semali. Inesizotha ngokwedlulele, ithembeke kakhulu, futhi ikude kakhulu futhi ibanzi. Enye yezinto ezisemuva kwempumelelo yokusabalalisa kabusha. Izinqwaba zomakhalekhukhwini zithobekile ngama-leva angama-25 uthola izingcingo ezingenamkhawulo kuzo zonke izinhlangano ezine-GB ethile ye-GB. IBulgaria iyindawo engajwayelekile yokuhlala uma ungekho entekenteke futhi ikakhulukazi uma kungenzeka ube nenkokhelo evela ngaphandle kweBulgaria, ngokwesibonelo, impesheni, noma usebenzela inhlangano engaphandle, impela iyindawo emnandi qala umndeni kanye nendawo oyithandayo ukuhlala ngaphezulu kwama-66% womhlaba.
Imininingwane eyisisekelo yobuzwe ngokutshalwa kwezimali kweBulgaria
Utshalomali oluncane lwe Ubuzwe ngokutshala imali eBulgaria
Ubuzwe ngokutshala imali eBulgaria
Icubungula isikhathi sobuzwe ngokutshalwa kweBulgaria
Izinketho Zokutshalwa Kwezimali ze Ubuzwe ngokutshalwa kweBulgaria
Kungani kufanele ubuzwe ngokuba utshale iBulgaria
IBulgaria iyilungu le-European Union futhi izoba yilungu lendawo yaseSchengen kungekudala. Ngakho-ke izwe linikela ngohlelo lwe-visa oluthandekayo. Ubuzwe baseBulgaria bungakunika ilungelo lokujikeleza iYurophu ngaphandle kwe-visa. Ngemuva kweminyaka engu-2 yesikhathi sokucubungula uzokwazi ukujabulela izinzuzo zokuba ngumhlali waseBulgaria unomphela. Izinzuzo zifaka intela ephansi, ukufinyelela emakethe ye-European Union nokunye okuningi. Ukuthola ubuzwe baseBulgaria awudingi ukwazi ulimi noma ukuba nefa lakho. Ngemuva kokuthola ubuzwe baseBulgaria ungahamba kalula futhi uhlale kunoma yimaphi amazwe e-EU.
Izinzuzo ezitholwa yisakhamuzi saseBulgaria zilethwa ziyasetshenziswa nasemalungwini omndeni wakho kubandakanya owakwakho nezingane.
Ubuzwe Ngohlelo lokutshala imali eBulgaria
Uqala ube yindawo yokuhlala unomphela izinyanga ezifika kweziyisishiyagalolunye. Ngaleso sikhathi kudingeka ukuthi uvakashele amaBulgaria amahlandla amabili kanye nommeli waseBulgaria ezweni lakho. Ngemuva kokulungiswa kwefayela lakho, kuzodingeka ukuthi uthumele inani lokutshala imali le-BGN 1 million (EUR 512,000). Lapho isitifiketi sokutshalwa kwemali sikhishwa ungafaka isicelo sohlobo lwe-D lweVisa. Lapho uthola i-visa yakho, uvakashela iBulgaria bese uthumela isicelo. Ngokuzayo lapho uvakashela khona ukuthola ikhadi lakho lokuhlala unomphela.
Ngemuva kokuba ngumhlali unomphela unyaka, ungafaka isicelo sokuba yisakhamuzi ngotshalo olungeziwe lwe-BGN 1 million (EUR 512,000)., Utshalomali lungaba idiphozi kumabhondi kahulumeni, noma ungatshala imali ebhizinisini eligunyazwe nguhulumeni. Ubuzwe bungatholakala eminyakeni emibili.
Uyacelwa ukuthi ufake i-BGN 1 million (i-appr. EUR 512,000) ku-Governmental Bond Portfolio isikhathi esiyiminyaka emihlanu. Ngemuva kweminyaka emi-5, inani eligcwele lizobuyiselwa, kepha ngaphandle kwenzalo. Inani elidingekayo lingaxhaswa noma ngabe ibhange laseYurophu.
Ukuthola imali esheshayo yokuba yisakhamuzi kwe-BGN 1 million (i-appr. EUR 512,000) iyadingeka. Ukutshalwa kwemali kufanele kugcinwe iminyaka emi-2. Ukutshalwa kwemali kungabekwa ku-Government Bond Portfolio noma ebhizinisini okufanele livunyelwe nguhulumeni waseBulgaria.
Isicelo sobuzwe sinemali engu-EUR 7,500. Amalungu omndeni akhokhelwa imali eyengeziwe. Imali yokucubungula yokuhlala kanye nokuba yisakhamuzi yi-EUR 25,000. Ngokwengeziwe, i-EUR 2,500 kufanele ikhokhelwe ingane engeyona i-18 okwamanje.
Ukusekelwa kwamakhasimende kobuzwe ngokutshala imali eBulgaria
Ithimba lethu le- Ubuzwe ngama-Investment Agents eBulgaria futhi Ubuzwe Ngokutshalwa Kwezezimali Abameli eBulgaria inikeza amaklayenti nemindeni yawo eBulgaria ukwesekwa kobuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eBulgaria, ukuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela eBulgaria namanye amathuba okutshalwa kwezimali kwamanye amazwe, emazweni angama-37.
Sinikeza okungabizi Ubuzwe ngezinsizakalo zokutshala imali kweBulgaria, ngokusebenzisa okungabizi kwethu ifemu yomthetho wokutshalwa kwezimali kanye nowokufika OkweBulgaria, abameli bezokutshalwa kwezimali abafinyelelekayo eBulgaria, Ubuzwe obungabizi ngabeluleki bezokutshalwa kwezimali eBulgaria, Ubuzwe obungabizi ngabameli bezokutshalwa kwezimali eBulgaria kanye nenkampani yokubonisana nabokufika engabizi kakhulu eBulgaria
Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali ezivela eBulgaria.
Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali kweBulgaria ngeReal Estate
Sinikeza ukusekelwa kokutshalwa kwezindlu eBulgaria ngombono wokuthi iklayenti kufanele lithole inzuzo enhle ekutshalweni kweBulgaria, noma kunini, lapho befuna ukuphuma kutshalo-mali abalwenze ngobuzwe babo ngokutshala iBulgaria. Sinozibopho nabathuthukisi bezindlu abambalwa kakhulu eBulgaria abanerekhodi elihle futhi impahla yabo isezindaweni ezinhle eBulgaria, ilanda izimbuyiselo ezinhle kakhulu.
Udinga ukwazi - Ubuzwe baseBulgaria Ngotshalomali
Ubuzwe Bommeli Wotshalomali eBulgaria buzonikeza ngosizo oluningi lwemibhalo ngobuzwe bakho obuyimpumelelo ngokutshala imali eBulgaria. Izinsizakalo zethu ezijwayelekile zobuzwe ngokutshalwa kwezimali eBulgaria zifaka:
Senza inkuthalo yokuqala efanelekile, ukulungiselela umbiko ngaphambi kokuncoma ubuzwe ngokutshala imali eBulgaria kumakhasimende ngokuthola ubuzwe baseBulgaria nokunciphisa ubungozi bokwenqaba.
Ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili nobuzwe bakho ngokufaka isicelo sokutshala imali eBulgaria sizodinga amakhophi askeniwe epasipoti yamakhasimende namalungu omndeni.
Ukuhumusha kanye ne-apostille yemibhalo Ubuzwe ngokufaka isicelo sokutshala imali eBulgaria. Abameli bethu abakhethekile bobuzwe ngokutshala imali eBulgaria ne-visa yegolide bazosiza ngokugcwalisa amafomu nemibhalo.
Lapho nje imibhalo yakho neyomndeni wakho yobuzwe ngokufaka isicelo sokutshala imali eBulgaria isilungile, sizoyigcwalisa ngeziphathimandla ezifanele zaseBulgaria.
Lapho isicelo sakho sobuzwe ngokutshalwa kwezimali eBulgaria sesamukelwe, sihlanganyela izindaba ezinhle nawe bese siqala ukulungiselela ezinye izesekeli.
Asibusekeli noma sibunikeze ubuzwe ngezinsizakalo zokutshala imali eBulgaria kubantu ababalulwe ngezansi noma amabhizinisi aseBulgaria:
Ubuzwe ngezinsizakalo zokutshala imali eBulgaria azinikelwa kubahwebi noma abasabalalisi bezingalo nezinhlamvu kusuka noma eBulgaria.
Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eBulgaria ahlinzekelwa ukubhekwa kwezobuchwepheshe eBulgaria noma ubunhloli bezimboni bezinhlelo zokutshala imali ngaphakathi noma kusuka noma ukuya eBulgaria.
Ubuzwe ngokubonisana ngokutshalwa kwezimali kweBulgaria ahlinzekelwa noma yimiphi imisebenzi engekho emthethweni noma yobugebengu eBulgaria.
Ubuzwe ngokusekelwa kotshalomali eBulgaria akukhona okwabantu abasebenza ngokusebenza kofuzo eBulgaria.
Ubuzwe ngezinsizakalo zokutshala imali eBulgaria akukhona okwamabhizinisi asebenzisana ngezikhali eziyingozi noma eziyingozi zebhayoloji noma zenuzi eBulgaria.
Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali ukusekelwa kweBulgaria akutholakali kubantu baseBulgaria abasebenza ngokuhweba, ukugcina eBulgaria, noma ukuthuthwa kwezitho zomuntu.
Ubuzwe ngokutshala imali eBulgaria akuyona eyezinkampani zokutholwa ezingekho emthethweni.
Ubuzwe insiza yezinhlelo eBulgaria akuzona ezezenkolo namahlelo azo ezinsiza eBulgaria.
Ubuzwe ngezinsizakalo zokutshala imali ku Bulgaria ayinikezwanga kubantu abasebenzelana nezithombe zobulili ezingcolile eBulgaria.
Ubuzwe Bethu abameli eBulgaria awasekeli ukuhweba ngebhizinisi ngezinto zezidakamizwa eBulgaria.
“Isaziso Esibalulekile : AbakwaMM Solutions INC bathatha ukuqapha okunengqondo ukucacisa amaphepha e-AML kumakhasimende aseBulgaria naseKYC yabo kepha asemukeli noma imiphi imithwalo yemfanelo yanoma ikuphi ukwenqatshwa yiziphathimandla eBulgaria ukuze kuvunyelwe isicelo Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eBulgaria.
Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eBulgaria nakwamanye amazwe, kanye nokunye okuningi okusekela.
Sinikeza ubuzwe obuhle ngokusekelwa kokutshalwa kwezimali eBulgaria ngokutshalwa kwezimali, ukuthuthela kwamanye amazwe kanye nokuhlelwa kwezindlu eBulgaria.
Isekelwa ubuzwe bamazwe ngamazwe ngolwazi lokutshala izimali kanye nezimfuneko zomthetho zaseBulgaria, sakha izixazululo ezinhle kakhulu.
Ubuzwe bethu ngezinsizakalo zokutshala imali eBulgaria bunikela ngamanani ashibhile, ngenani lempumelelo elingafinyeleleka kangcono eBulgaria.
Sithathe isipiliyoni seminyaka yobuzwe bobabili eBulgaria esekela amaklayenti nemindeni yawo ngeBulgaria.
Ubuzwe obunolwazi ngabameli bezokutshalwa kwezimali eBulgaria kanye nabameli bezomthetho baseBulgaria abanikeza ukusekelwa kumakhasimende.
Ngaphambi kobuzwe bakho beBulgaria nangemva kokuvunywa, ilungu lethu leqembu eliphakeme lizoba khona ngebhizinisi noma ukusekelwa komuntu siqu kweBulgaria
Sinokuhlangenwe nakho kwamazwe omhlaba kwezobuzwe ngokutshala imali kubandakanya iBulgaria, sisiza amaklayenti avela emhlabeni wonke ngezinsizakalo ezihamba phambili.
Uma kwenzeka, ubuzwe bakho ngokutshala imali eBulgaria buhluleka, kunamanye amazwe angama-36 esiwasebenzisayo, sikulungele ngohlelo B.
Bala izindleko zobuzwe ngokutshala imali ukuya eBulgaria
Ukubala izindleko zobuzwe ngokutshala imali eBulgaria sicela ugcwalise yonke imininingwane kufaka phakathi amalungu omndeni kanye neminyaka yabo. Ngenxa yenani elikhulu lamakhasimende eBulgaria, siyakwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono ngezindleko eziphansi. Izibalo zizofaka, izindleko, zobuzwe ngohlelo lokutshala imali lweBulgaria nezinye izindleko.
Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eBulgaria nakwezinye izinsizakalo
Ngaphandle kobuzwe ngokubonisana ngokutshalwa kwezimali kweBulgaria, sihlinzeka ngezinsizakalo zebhizinisi, i-IT ne-HR naseBulgaria, ongayitholi ngaphansi kwesambulela esisodwa esinikezwe abanye abaxhumanisi baseBulgaria abasenza isitolo esisodwa eBulgaria kanye namazwe we-106.
Sisekela indlela yamakhasimende ethu edlula ubuzwe ngokutshala imali eBulgaria ngosizo lwabameli bethu, ababonisi kanye nokubopha eBulgaria nakwamanye amazwe.
Ngemuva kobuzwe ngokutshalwa kwemali ukuze IBulgaria uma uhlela qala ibhizinisi ngokuthenga ibhizinisi elivele likhona eBulgaria ukuqala ngokushesha eBulgaria.
Ngemuva kobuzwe ngokutshala imali eBulgaria, isethaphu ibhizinisi ku Bulgaria.
Abameli Bezakhamizi Ngokutshalwa Kwezimali eBulgaria
Sinikeza ubuzwe obusemthethweni ngezixazululo ze-Investment zeBulgaria futhi impumelelo yamakhasimende ethu ibaluleke kakhulu, ngoba iBulgaria, singabaholi, inkampani yethu yezomthetho eBulgaria inezinhlangano ezihamba phambili zokufika naseBulgaria, sinedumela lokuletha ulwazi oluhle kakhulu lwamakhasimende e-Bulgaria nge Sula izixazululo zamasu okutshala imali kubantu baseBulgaria nemindeni yabo. Ubuzwe bethu ngethimba lokutshala imali eBulgaria buhlinzeka ngezixazululo ezenziwe ngobuqili zempumelelo yeKlayenti.
Amandla wommeli weBulgaria ayadingeka kuzo zonke izenzo zomthetho ezenzelwe wena yi-Citizenship ngabameli bezokutshalwa kwezimali eBulgaria. Uma useBulgaria noma uhlela ukuvakashela iBulgaria, singathola amandla akho ommeli lapha.
Imibuzo Ebuzwa Njalo - Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eBulgaria
Yiluphi utshalomali oluncane lobuzwe ngokutshala imali eBulgaria?
Ukutshalwa kwemali okuncane kobuzwe ngokutshala imali eBulgaria yi-EUR 1,024,000.
Ngabe unikeza ukusekelwa kwezomthetho kweBulgaria yoBuzwe ngokutshala imali?
Yebo, ummeli wethu eBulgaria kanye nabamele eBulgaria banikela ukusekelwa kobuzwe ngokutshala imali eBulgaria.
Ingabe ubuzwe ngokutshala imali eBulgaria kubiza?
Izindleko zobuzwe ngokutshalwa kwezimali eBulgaria kanye nobuzwe ngezidingo zesikhwama sokutshala imali eBulgaria ngezabantu abaphezulu abanenani elikhulu, sikhokhisa kuphela imali yokubonisana ngobuzwe ngokutshalwa kwezimali eBulgaria, futhi sinikeza nezinye izinto eziningi ezisekelwa ubuzwe ngezisombululo ze-Investment.
Iziphi izakhamizi zezwe ezingafaka isicelo sobuzwe ngokutshala imali eBulgaria noma nge-visa yabatshalizimali eBulgaria?
Ubuzwe ngezinsizakalo zokutshala imali bungasetshenziswa izakhamizi zanoma yiliphi izwe kepha izibonelo ezimbalwa ubuzwe ngokutshala imali eBulgaria kusuka e-Asia, Ubuzwe ngokutshala imali eBulgaria kusuka e-Afrika, Ubuzwe ngokutshala imali kuya eBulgaria kusuka eYurophu, Ubuzwe ngokutshala imali kuya eBulgaria kusuka eNingizimu Melika, Ubuzwe ngokutshalwa kwemali eBulgaria kusuka eMalaysia, Ubuzwe ngokutshalwa kwemali eBulgaria kusuka eBangladesh, Ubuzwe ngokutshalwa kwemali eBulgaria kusuka e-Indonesia, Ubuzwe ngokutshala imali eBulgaria kusuka eSri Lanka, Ubuzwe ngokutshala imali eBulgaria kusuka eNepal, Ubuzwe ngokutshala imali eBulgaria kusuka eNdiya kanye nobuzwe ngokutshalwa kwezimali eBulgaria kusuka e-UAE.
Ubuzwe Obuqeqeshiwe ngokuHlelwa Kwezimali eBulgaria
Cela ukubonisana kwamahhala kobuzwe bakho ngokutshala imali eBulgaria
Amagama abalulekile kubuzwe ngokutshalwa kwezimali kweBulgaria